Wararka Maanta: Arbaco, Aug 11, 2021-Kenya iyo Soomaaliya oo ku heshiiyay iskaashiga amniga, ganacsiga iyo maalgashiga
Heshiiskan ayaa daba socda wada -hadallo Raysal -wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ku dhex maray magaalada Mombassa Salaasadii shalay.
War qoraal ah oo uu soo saaray, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu soo dhoweeyay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay xasilloonida horumarka gobolka.
“Nabad la’aan, ma jiri karto barwaaqo. Aynu xoogga saarno u adeegidda dadkeenna. Tani waxay suurtogal noqon kartaa oo kaliya haddii aan si wadajir ah uga wada shaqeyno sidii aan u cirib tiri lahayn argagixisada. Waxaa la joogaa waqtigii la hagaajin lahaa ganacsiga oo la xallin lahaa arrimaha socdaalka si loo oggolaado is-dhexgalka dadka-dadka, ”ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka dowladda Kenya.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qiray xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in saaxiibtinimadu ay ku saleysan tahay "deris wanaag, iskaashi, xasillooni iyo is -ixtiraam".
“Maanta waa bilowgii xiriir xooggan oo qoto dheer oo walaaltinnimo. Soomaaliya waxay ku dadaali doontaa sidii loo xoojin lahaa Guddiga Wadajirka ah ee Iskaashiga oo dan u ah labada shacab, midnimadooda iyo xasiloonidooda iyo wixii ka baxsan gobolka iyo qaaradda ”ayuu yiri RW Rooble oo adeegsanaya turjumaan.
Raysal Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku boorriyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu muranka soohdinta badda u daayo Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda.